January 24, 2021 - Khitalin Media
တစ်​ကိုယ်​လုံးတန်​ဖိုး​တွေ တွက်​ပြ​တာ ​ခေတ်​စားလာ​တော့ ကြုံဖူးတာ​လေး ​ပြောပြချင်​တယ်​….
January 24, 2021 by Khitalin Media
တစ်​ကိုယ်​လုံးတန်​ဖိုး​တွေ တွက်​ပြ​တာ ​ခေတ်​စားလာ​တော့ ကြုံဖူးတာ​လေး ​ပြောပြချင်​တယ်​…. ဟိုးတစ်​​လောက အန်​ကယ်​တစ်​​ယောက်​ သူ့နာရီချွတ်​ပြီး” ဒီနာရီဘယ်​​လောက်​တန်​မယ်​ထင်​လဲ မှန်းကြည့်​” ဆိုပြီး ကျွန်​​တော့်​ကို​​မေးတယ်​….။ (သူကချမ်းသာ ​အောင်​မြင်​​နေတဲ့ ကုမ္ပဏီပိုင်​ရှင်​တစ်​ဦးပါ) မမှန်းတတ်​ဘူးခင်​ဗျ လို့​ပြောလိုက်​​တော့ သူက ပြန်​​ပြောတယ်​….။ အ​မေရိကန်​​ဒေါ်လာ ၆သိန်း တန်​တယ်​တဲ့………မြန်​မာ​ငွေနဲ့ဆို သိန်း ၇၈၀၀ ​ကျော်​တန်​တာ​ပေါ့…..။(အမ​လေးဗျ… အံ့သြလို့မပြီး​သေး..) “ဟိုပွဲ ဒီပွဲ အခမ်းအနား​တွေမှာ တစ်​ခါလာလည်း ဒီနာရီ တစ်​ခါလာလည်း ဒီနာရီ ဖြစ်​​နေမှာစိုးလို့…. ​ဒေါ်လာ ၆သိန်း ၇သိန်း တန်​ နာရီချည်း ၅ လုံး​လောက်​ ၀ယ်​ထားတယ်​” ဆို​တော့…..ဟို​က်……ရှားဘား……ကျွန်​​တော်​ ပက်​လက်​လန်​သွားတယ်​…..။ (ကိုယ်​​တွေ တစ်​မျိုးလုံး တစ်​​ဆွေလုံးပိုင်​ဆိုင်​မှုကို​ပေါင်းရင်​​တောင်​ သူ့နာရီဖိုး​မရှိဘူး….) ဒါ​ပေမဲ့…..အခု​တော့ အဲ့ဒီနာရီထဲက တစ်​လုံးပြီး တစ်​လုံးပြန်​​ရောင်း​နေပြီတဲ့….” စီးပွား​ရေးအတွက်​​ငွေလိုလို့လား…..အန်​ကယ်​..” လို့​မေးလိုက်​​တော့…. ” … Read more
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ချစ်သူများနေ့ (Valentine’s Day) အဖြစ် အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ချစ်သူများနေ့ဖြစ်လို့ စုံတွဲတွေအတွက်တော့ နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီးပါပဲ။ ဗီဒေးကို နွှဲဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြတဲ့ စုံတွဲတွေအားလုံးကို ပွင့်လင်းမြင်သာ ခေတ်ကြီးမှာ ပိုပိုလေးကလည်း လူငယ်အချင်းချင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ရေးလိုက်တော့မယ်နော်..။ ဗယ်လင်တိုင်းမ်စ်ဒေး ဖြစ်လာရတဲ့ နောက်ခံဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အားလုံးသိပြီးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မသိသေးသူတွေအတွက် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေး နဲနဲလောက် ပြောပြပါရစေ.. လက်ထပ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားတဲ့ ဘုရင်ခေတ်တစ်ခုမှာ ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး စိန့်ဗယ်လင်တိုင်းမ်က ချစ်သူစုံတွဲတွေကို သူ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ ဘုရင်ကြီး မသိအောင် တိတ်တဆိတ် လက်ထပ်ပေးတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ ဘုရင်ကြီးသိသွားတဲ့အခါ ဘုန်းတော်ကြီးကို ကွပ်မျက်လိုက်တယ်။ အခက်အခဲတွေကြားကနေ ချစ်သူတွေကို ဆုံဆည်းပေးခဲ့တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ဗယ်လင်တိုင်းမ်ကို အောက်မေ့ဖွယ်အနေနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ … Read more
ချုံမြင်တိုင်း တိုးချင်နေကြတဲ့ ချစ်သူစုံ တွဲများအချိန်ခဏပေးပြီးဖတ်ကြည့်ပေးပါ
ချူံမြင်တိုင်း တိုးချင် နေကြတဲ့ ချစ်သူ စုံတွဲများ ဖတ်ကြည့်ပေးပါ သူတို့ဖတ်ရအောင် ရှဲပေး လိုက်ကြပါ မောင်တို့ .. မယ်တို့ .. အနေနဲ့ လူငယ် သဘာဝ ချိန်းဆို တွေ့ဆုံခွင့် အပြည့်အဝ ကိုယ်စီ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ သူကို လူသူ အသွားအလာ ပြတ်တဲ့ ချုံကြို ချုံကြား နေရာတွေမှာ ခေါ်မသွား သင့်ဘူး။ ချုံတိုးပြီး ချိန်းတွေ့တဲ့ စုံတွဲ အချစ်က ချုံတိုး စုံတွဲအချစ်ဘဲ ဖြစ်မယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ်တန်းဖိုးထား မြတ်နိုးရာ မရောက်ဘူး အချစ်အကြောင်းကို စဉ်းစား လာကြပြီ ဆိုရင် လူကြီးလူကောင်း ဆန်ဆန် အိနြေ္ဒရရ ချိန်းတွေ့ ကြပါ။ ရပါ၏။ နောက်ပြီး မောင်တို့ … Read more
မြန်မာလူမျိုးများ ဆေးရုံမှာ လူနာကြည့်သွားတဲ့အခါ သိထားစရာအချက်များ
နောက်ဆုံးထွက်သက်ကို ပင်ပမ်းကြီးစွာ ဖြတ်ကျော်ရမယ့်နေရက်တွေ၊အချိန်တွေ ရောက်လာတဲ့အခါ ကျေးဇူးပြုပြီး လူနာကြည့်၊လူနာအားပေး မလာပါနဲ့တော့… ၁။စကားပြောဖို့ကိုပင် မနည်းအားယူနေရမယ့်အချိန်မှာ နေကောင်းလား၊သက်သာလားဆိုတဲ့ သင့်မေးခွန်းတွေ မဖြေချင်တော့ပါ။ ၂။ရေမွှေးဆွတ်ပြီး ငါ့အနား လာမရပ်ပါနဲ့ (အမွှေးနံ့၊ချွေးနံ့၊ဟင်းနံ့တွေကိုတောင် မခံနိူင်တော့တာကို သတိပြုမိပါစေ) ၃။ဝတ္တရားအရ လူနာမေးလာရင်း ဆယ်လ်ဖီလာမဆွဲပါနှင့် ( ထွက်ခွာရတော့မယ့် ငါ့ကိုဘေးနားထားပြီး သင်ပျော်ပြမနေပါနှင့်၊ငါ့ကိုချစ်ရင် အားနာပါ၊ သံဝေဂလိုလိုဘာလိုလိုနှင့် ငါချစ်တဲ့သူတွေကို ငါ့ရုပ်သွင်အား မပြပါနှင့်) ၄။လူနာမေးလာတဲ့အခါ ငါလေလည်ချင်တာတွေ ကျင်ငယ်စွန့်ချင်တာတွေ ကျင်ကြီးစွန့်ချင်တာတွေကို အောင့်ထားရတဲ့အခါ ငါ့အတွက် တကယ်ပင်ပမ်းလွန်းလို့ပါ…. ၅။ငါ မတတ်နိူင်လို့ ဆေးဖိုးဝါးခတွေ ပေးတဲ့အခါ ငါမသိအောင်ပေးပေးပါ။ နောက်ဆုံးထွက်သက်မှာ ကျေးဇူးတရားတွေက ငါ့ကိုအင်အားထက် ဖိအားတွေဖြစ်ချင် ဖြစ်သွားစေနိူင်ပါတယ်…. ၆။ကျေးဇူးပြုပြီး သူများအကြောင်းတွေ ငါ့ကို လာမပြောပါနဲ့ နောက်ပိုင်းသံယောဇဉ်တွေ ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေရသူအတွက် စိတ်အနှောက်အယှက်ကြီးစွာ ဖြစ်ရပါတယ်… … Read more
ကျန်းမာရေးပါရဂူကြီးများရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ လူသားတွေအတွက် အကောင်းဆုံး အိပ်စက်အနားယူချိန်ဟာ ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၃ နာရီအတွင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒီအဆိုကို ဆေးပညာရှင်များအားလုံးနီးကလည်း လက်ခံထားကြပါတယ်။ ၁၁-၃ အတွင်း အနားမယူပဲ အလုပ်တစ်ခုခု လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေလိမ့်မယ်။ ချက်ချင်းမဟုတ်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ ဆိုးဝါးလာစေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဓိကအရေးကြီးဆုံး အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ အသည်းဟာ ၁၁-၃ အချိန်မှာ လူတို့စားသုံးထားတဲ့ အစားအစာများထဲမှ အဆိပ်အတောက်နဲ့ မလိုအပ်တဲ့အရာများကို စစ်ထုတ်ပေးနေရလို့ပါပဲ။ အသည်းရဲ့ အလုပ်လုပ်ချိန်လို့ ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီအချိန်အတွင်း ခန္ဓာကိုယ်ကို အနားပေးထားရပါတယ်။ အိပ်စက်အနားယူရပါတယ်။ အနားမပေးရင် အသည်းရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုများကို ထိခိုက်လျှော့နည်းစေပြီး အသည်းကို တဖြေးဖြေး ပျက်စီးသွားစေပါတယ်။ အသည်းမကောင်းတော့ရင် ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များ ပုံမှန်မလည်ပတ်နိုင်တော့ပဲ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုမှာ မူလီတစ်ခု … Read more
သင့်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်သတိရနေပြီဆိုတာ သေချာနေတဲ့ ” နိမိတ် “ခံစားချက်များ
လူတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို သတိရနေပြီဆိုရင် ဘယ်လိုနမိတ်တွေဖြစ်လာလဲ သင်သိလား …၊ တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဆိုတာ သိပ်ကိုဆန်းကျယ်ပါတယ်။ စိတ်စွမ်းအင်ဆိုတာလည်း မယုံမရှိနဲ့နော်။ ဒါဆိုရင် တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို အရမ်းပဲ သတိရနေ၊ လွမ်းနေပြီဆိုရင် ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာတတ်သလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင် သင့်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်သတိရနေပြီဆိုတာ သေချာနေတဲ့ ” နိမိတ် “ခံစားချက်များ… သင့်မျက်နှာကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ ပြုံးသွားမယ်” အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဗီဒီယိုကောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် ပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်ကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ တင်ကို သူ့မျက်နှာလေးမှာ နှုတ်လမ်းလေးကွေးပြီး ပြုံးသွားမယ် ဆိုရင်တော့ သူဒီရက်ပိုင်း အတွင်း သင့်ကို အရမ်းလွမ်းနေတာ သေချာနေပါပြီနော် …။ သင့်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်သတိရနေပြီဆိုတာ သေချာနေတဲ့ ” နိမိတ် “ခံစားချက်များ သင်သူ့အကြောင်း အိပ်မက်ထဲ ထည့်မက်မယ်” … Read more
အသက် ၂၀ အရွယ်ဆိုတာ မတည်ငြိမ်သေးတဲ့အရွယ်ပါပဲ။ ဒီလိုအချိန်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အမှားအယွင်းမဖြစ်အောင် သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပျိုမေတို့အတွက် အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့အရာတချို့ကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ( ၁ ) လက်မထပ်ပါနဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ်က အရမ်းငယ်လွန်းပါတယ်။ ဘဝတက်လမ်းအတွက်လည်း ကြိုးစားလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ရူးမိုက်ပြီးလက်ထပ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီအရွယ်က မတည်ငြိမ်သေးတဲ့အရွယ်မို့ လက်မထပ်သင့်ပါဘူး။ ( ၂ )ပုံအောပြီးမချစ်ပါနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပုံအောချစ်ထားပြီးမှ ကွဲသွားခဲ့ရင် ကိုယ်ပဲအလူးအလဲခံစားရမှာပါ။ ဒီအရွယ်မှာ မတည်မြဲနိုင်သေးတဲ့အတွက် တစ်ခုခုဆို အရမ်း Serious မဖြစ်ပါနဲ့။ ကိုယ့်အတွက် ရှေ့ဆက်ရမယ့်အချိန်တွေ၊ တွေ့ရမယ့်လူတွေက အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း အယုံမလွယ်ပါနဲ့ ( ၃ )အတတ်ပညာကိုဦးစားပေးပါ ရည်းစားထားပြီး … Read more
နမ်းတာနဲ့ ပက်သတ်လို့ သင်မသိသေးတဲ့ အကြောင်းများ….
( ၁ )လူတိုင်းက နမ်း တာကို (……)ဆက်ဆံ ရတာထက်တောင် ပိုကြိုက်သေးတယ် ….။သူတို့ကိုဘာလို့ နမ်းရတာ ကြိုက်တာလဲလို့ မေးလိုက်ရင် သူတို့ကလည်းရှက်ပြုံးပြုံးနဲ့ ပျော်မွေ့လို့ လို့ပြောကြတယ်။ နမ်းတာက အဲ့ဒါထက်ပိုတဲ့ ခံစားချက် ကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်။ နမ်းခြင်းမှ ရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများ ( ၂ ) ကိုယ်ခံစွမ်းအားတိုးပေးတယ် နယ်သာလန် နိင်ငံရဲ့ သုတေသနပြုချက်အရသင်နမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားသန်း 80 လောက်ကသင့်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာရှိနေတယ်။ အဲ့ဒီအများကြီးထဲကမှ ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးကသင့်ကိုအကျိုးပေးတဲ့ ဘက်တီးရီးယားဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားတိုးဖို့အတွက်ပါ။ ( ၃) သွား ကျန်းမာရေးကောင်းတယ် နယူးယောက်ကဆရာဝန်တစ်ဦးက နမ်းခြင်း ဟာသွား ရည်ထွက်အားကောင်းအောင် လှုံဆော်ပေးပြီးအဲ့သွားရည်တွေကသွားထဲမှာရှိတဲ့ အက်ဆစ်ကိုလျော့နည်းစေတယ်။ အဲ့ဒီအရာတွေကသင့် သွား ကိုပိုဖြူစေတယ်။ ဒါ့အပြင် အနံ့ဆိုးတွေကိုလည်းပယ်ရှားပေးတယ်။ ( ၄ ) ဦးနှောက် … Read more
သင့်ရဲ့ နာမည်မှာ”M” ပါခဲ့သော်…..
သင့်ရဲ့ နာမည်မှာ ”M” ပါခဲ့သော်….. ရယ်လိုက်ရင် အသေချစ်ဖို့ကောင်းတာ 9+ (နာမည်မှာ ”M” ပါတဲ့ သူတွေရဲ့ အဓိက လျှုိ့ဝှက် လက်နက် တစ်ခုပဲ) လူ တစ်ဖက်သားကို ကူညီတတ်တဲ့ စိတ်က မွေးရာပါပဲ… ( အဲ့ဒီ အားနည်းချက် ကိုမှ အသုံးချ သွားတဲ့ သူတွေက ရှိသေး ) သဘောထား ကြီးပြီး ခွင့်လွှတ်လွယ် တတ်တယ်… ( ဒေါသထွက်လည်း ခဏပဲ ပြီးရင် သူမဟုတ် သလိုနဲ့ ) နောက် နာမည်မှာ ”M” ပါနဲ့ သူတွေရဲ့အားသာ ချက်က ခလေး ဆန်လွန်းတဲ့ အပြုအမူ လေးကြောင့် ချစ်မိ သွား လိမ့် မယ်… ( … Read more